(၁၀) တန်း အမှတ် စာရင်း ထုတ်ပေး မယ့် ရက် နဲ့ ထုတ်ပေး မယ့် ပုံစံ ကို ထုတ်ပြန် လိုက် ပါပြီ (ရှယ်ထားပေး ကြပါ အုံးဗျို့….) – အနုပညာရပ်ဝန်း
(၁၀) တန်း အမှတ် စာရင်း ထုတ်ပေး မယ့် ရက် နဲ့ ထုတ်ပေး မယ့် ပုံစံ ကို ထုတ်ပြန် လိုက် ပါပြီ (ရှယ်ထားပေး ကြပါ အုံးဗျို့….)
ယခုနှ စ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (၁၀)တန်း အောင်မှတ် စာရင်းများ ကို သြဂုတ် ၂ဝ ကျော်တွင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထား ထုတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနို င်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာ နက စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။
“အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ဖြစ်ဖို့ များတယ် အခုတော့ နည်းပညာ ပိုင်းတွေ ပြင်ဆင်နေလို့ မထုတ်ပြန်သေးတာဖြစ်မယ်။ အမှတ်စာရင်းထုတ်တာကို နိုင်ငံတော်ဝ င်ေ ငွအဖြစ် လုပ်ထားတာဆိုတော့ Paymet တစ်ခုနဲ့သူတို့လုပ်မှာ၊ ငွေကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတွေထဲဝင်သွားအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲတော့ မသိသေးဘူး။ အွန်လို င်းနဲ့ပေးဖို့တော့ သူတို့ရည်ရွယ်နေတယ်။ အခုနည်းပညာပိုင်း အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်” လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိ ယညွှန်ကြားေ ရးမှူး ချုပ် ဒေါက်တာတ င်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် လူစုလူ‌‌‌ဝေး မဖြစ်စေရန် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးရေးကို စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အမှတ်စာရင်းထုတ် ယူနိုင်မ ည့်နေ့ရ က် အတိအကျကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဦးစီးဌာနက ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကာ ယခုလအ တွင်း ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့ပြင် အခြေခံပ ညာအထက် တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင် လက်မှတ်များကို စာမေးပွဲ ဖြေပြီးချင်း ထုတ်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့ သော်လည်း COVID-19 ရောဂါဖြစ် ပွားမှုကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကာ ယခုလအတွ င်းထုတ်ပေးရန် ကိုဗစ်ကော်မတီကို တင်ပြထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ်များကို ကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်မှု၊ ကျောင်းစာမေးပွဲများလာရောက်ဖြေဆိုမှု၊ ရမှတ်များ အပါအ ဝင် စံသတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်နှင့်ကိုက် ညီပါက သက်ဆိုင်ရာကျော င်းများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်
ယခုနှ စ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (၁၀)တန်း အောင်မှတ် စာရင်းများ ကို သြဂုတ် ၂ဝ ကျော်တွင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထား ထုတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနို င်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာ နက စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။“အှနျလိုငျးကတစျဆငျ့ဖွစျဖို့ မြားတယျ အခုတော့ နညျးပညာ ပိုငျးတှေ ပွငျဆငျနလေို့ မထုတျပွနျသေးတာဖွစျမယျ။ အမှတျစာရငျးထုတျတာကို နိုငျငံတောျဝ ငျေ ငှအဖွစျ လုပျထားတာဆိုတော့ Paymet တစျခုနဲ့သူတို့လုပျမှာ၊ ငှကေိုနိုငျငံတောျဘဏ်ဍာတှထေဲဝငျသှားအောငျ ဘယျလိုစီစဉျထားလဲတော့ မသိသေးဘူး။ အှနျလို ငျးနဲ့ပေးဖို့တော့ သူတို့ရညျရှယျနတေယျ။ အခုနညျးပညာပိုငျး အဆငျသငျ့ဖွစျအောငျလုပျနတေယျလို့ ကွားတယျ” လို့ အခွခေံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိ ယညှှနျကွားေ ရးမှူး ခြုပျ ဒေါကျတာတ ငျမောငျဝငျးက ပွောပါတယျ။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် လူစုလူ‌‌‌ဝေး မဖြစ်စေရန် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးရေးကို စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အမှတ်စာရင်းထုတ် ယူနိုင်မ ည့်နေ့ရ က် အတိအကျကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဦးစီးဌာနက ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကာ ယခုလအ တွင်း ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့ပြင် အခြေခံပ ညာအထက် တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင် လက်မှတ်များကို စာမေးပွဲ ဖြေပြီးချင်း ထုတ်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့ သော်လည်း COVID-19 ရောဂါဖြစ် ပွားမှုကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကာ ယခုလအတွ င်းထုတ်ပေးရန် ကိုဗစ်ကော်မတီကို တင်ပြထားကြောင်း သိရပါတယ်။အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ်များကို ကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်မှု၊ ကျောင်းစာမေးပွဲများလာရောက်ဖြေဆိုမှု၊ ရမှတ်များ အပါအ ဝင် စံသတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်နှင့်ကိုက် ညီပါက သက်ဆိုင်ရာကျော င်းများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်credit
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဘောလုံးပွဲကို စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ လာရောက်အားပေးမည်ဟု အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြော